Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya waa dambiile u bartay inaan la ogaanin
Itobiya waa dambiile u bartay inaan la ogaanin
Posted by ONA Admin	/ August 15, 2011
Qofka dambiilaha ah waxaa lagu gartaa marka farta lagu fiiqo inuu caraatamo oo xile iyo xoolaba is tiro. Itobiya barnaamijkii xaqiiqada ka waramayay ee laga sii daayay BBC Newsnight wuxuu ku riday madax xanuun iyo qandho, sababtoo ah marnaba ma’aanay filaynin in beenteeda la rumaysan waayo, maadaama ay caalamka ka go’doomisay Itobiya gaar ahaan Ogadenya oy ka dhigtay xero ciidanka u xidhan oon loo dhawaan karin lana sawiran karin. Jawaabta ay Itobiya ka bixisay marka laga yimaado qoraalada faraha badanee ay shabakadaha ku qoreen ama idaacadahooda iyo TV-yadooda ay ka sheegeen, waxaa ka mid ah booqashada KT Meles uu ku tagay Shiinaha isagoo sii kaxaystay Siilaanyo, suu reer Galbeedka u tuso inay heleen saaxiib kale oon aqoonin wax la yidhaahdo xuquuqul-insaan oy ku wareegayaan hadday ka dayn waayaan run-sheega.
Qoraal dheer ayay shabakadda Walta ee afka Wayaanaha ku hadasha ka qortay barnaamijkii BBC Newsnight, iyagoo isku dayaya inay shacabka Itobiya u tusaan in arimaha lagu soo bandhigay filimkaa uu yahay dacaayad ay mucaaradka Itobiya oy ONLF ugu horeyso u dhiibeen BBC-da. Qoraalkaa oo aad u dheer markaan ka tagno qaybaha ka hadlaya xad-gudubyada loo gaystay shacabka Itobiya ee barnaamijka lagu soo qaatay, oon uga gudubno qaybaha ay kaga hadleen Ogadenya iyo dhibka loo gaystay dadka shacabka ah iyo haweenka la fara xumeeyay ee barnaamijka lagu wareystay, waxay markhaatiga ugu horeeya u soo qaateen Cabdirashiid Duulane oy yidhaahdeen isagaba waa Somali wuxuuna ku daleeceeyay saxafiyiintii barnaamijka soo diyaarisay inay warka ka soo qaateen xerada Dhadhaab ONLF-ta joogta –
(That is why, Ethiopia’s Dep. Ambassador to the UK, Abdirashid Dulane, an ethnic-Somali himself, criticised the journalist for relying on information provided by ONLF people in the Dadaab camp in Kenya.) Waa sadaro ka mid ah taariikhda.
Eedeymaha gabdhaha la wareystay markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen hadda ka hor ayay HRW soo bandhigeen wareysiyadan, Itobiyana way ku gacan saydhay. Taasoy ula jeedaan hadday Itobiya diiday waxba kama jiraan. Caqliga Itobiya waa midkaa, waana midka lagu shubay ina Duulane. Diid wax walba, xataa hadaad aragto walaashaa oo ka cabanaysa inay ciidamada Itobiya faraxumeeyeen.
Waxaa kaloo kaa yaabinaya habka ay u fikirayaan Wayaanaha oo waliba ay doonayaan kuwa u adeega inay u fikraan. Markay ka hadlayeen tuulooyinka la gubay ee barnaamijka lagu soo bandhigay waxay qorayaan inay ONLF siisay haya’adda baadhitaanka samaysay sawirada muujinaya tuulooyinka ay gubeen ciidamada Itobiya.
(These images purport to show villages in the Ogaden burned by Ethiopian forces as part of a campaign against the ethnic Ogaden people.These images were handed to the Bureau by the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an opposition movement which has been labeled a ‘terrorist group’ by the Ethiopian government.)
Malaga yaaba inay isku qanciyeen oy run ka tahay inay ONLF haysato ama kiraysatay dayax gacmeedyada soo sawiray tuulooyinka la gubay ee caalamka u soo bandhigay, gaar ahaan markay inkirtay Itobiya eedeymaha loo soo jeediyay. Si kastaba waxay ka mid tahay un dhaqanka xukuumadaha Itobiya ee ah wax walba diid, waxaad doontana samee ilaa luguugu imanayo Adisababa.
Itobiya ama dalkan la odhan jiray Abyssinia waxaa dhaqan u ahaa aduunsi iyo in shacabka la duleeyo oo la gumaado ilaa uu ka ogolaanayo in la leeyahay isaga iyo xoolihiisaba. Xukunka (boqorka) wuxuu shacabka ku gumaadi jiray koox danaystayaal ah oo magacyo loo bixiyo. Inkastoo dalkeena ilaa xad aynu ka badbaadnay dullinamada la baday shucuubta kale sida Oromada, Oraagada, Shucuubta Koonfur iwm., waxaad moodaa hadda inay adeegsanayaan Wayaanaha sida Cabdi iley, Cabdifataax, Cabdirashiid Duulane iyo maamulada ka dhisan Somaliya si shacabka Somaliyeed loogu duleeyo Wayaanaha Meles Zinawi.